Namuhla, omningi okungase yezwa antioxidant. Lokho kusho futhi ukuthi ibadla? Kuhunyushwe kusuka elithi Latin imele: «anti» - ngokumelene, "oxys" - omuncu, okusho ngomqondo truest - "antioxidant" ... Kuyini khona ukuzuza empilweni?
Namachibi - inqubo obhubhisayo iyiphi into. Kuthatha indawo ngaphansi isenzo asebenzayo zinhlobo oksijini - radicals khulula. Abolile amahlamvu, nokugqwala, yezifo nokuguga - konke lokhu ngenxa ukusabela oxidative. Akukhona nje imvelo bangaphandle, kodwa futhi umzimba womuntu uqobo synthesizes kubo njalo - kuze kufinyelele molecule ezingamakhulu amabili wamabhiliyoni ngosuku. Kodwa ngo Emvelweni zonke izinto zemvelo, Ngakho-ke, kuyasiza ukuba simelane ukubhujiswa antioxidant. Kuyini - panacea lazo zonke izinkinga? Cha, kodwa lena kuyindlela enhle ukubambezela yonke inqubo yokuguga, ukuvimbela isifo.
Found in ukudla okuthile. Antioxidants zemvelo - ke sika amajikijolo, izithelo, amantongomane, imifino, njengoba anamavithamini zemvelo E no-C, carotenoid, selenium. Aphakeme kakhulu izakhiwo antioxidant iyizithelo izitshalo imibala ebomvu-orange, blue and black. Phakathi laba baholi: Ubhontshisi mottled, currants, ama-raspberry, cranberry, asithena, walnuts, ama-aphula, ama cherry, aluhlaza okwesibhakabhaka, izaqathe, garlic, ikhofi eziphilayo kanye newayini elibomvu.
Zokwenziwa - kusho yokufakelwa, okungukuthi, izidakamizwa, izithasiselo zokudla (E 300-399) ... Ngokungafani esingokwemvelo, Ungasingenisi izinzuzo umzimba womuntu, kungabangela izifo ezihlukahlukene. Umsebenti wabo oyinhloko - ukubambezela izinga imikhiqizo namachibi, ukwandisa impilo eshalofini imikhiqizo. Ngakho, musa wathumba lulwimi, okusemathinini ukudla esitolo.
Yikuphi owesaba i antioxidant?
Sekuyisikhathi eside ososayensi watadisha antioxidant. Kulula izidakamizwa Breakable, kunobufakazi besayensi. eziyingozi Ikakhulukazi kuye, ukubhema, ukushuka ngokweqile, utshwala, yokuhlala ezindaweni angcolile, ukuntuleka ukuchayeka umoya ohlanzekile, isimo isifo, ubudala mkhulu kunezinhliziyo engamashumi amahlanu. Kungcono ukuqeda imikhuba yabo emibi ukuhola ngendlela enempilo. Uma isimo angalungiseki kubalulekile athathe umthamo ephakeme Antioxidants, mhlawumbe ngisho ifomu umthamo (udokotela).
imithetho Ukwamukelwa Antioxidants
Khumbula ukuthi udinga:
Njalo wengeza yokudla ukudla okunhlobonhlobo: izithelo fresh ezimibalabala, imifino, amantongomane, ngezinye izikhathi - ingilazi yewayini elibomvu.
Musa bezisebenzisa kabi, ungayisebenzisi unomphela antioxidant ukwakheka equkethe. Kuhle kakhulu esikhumbeni, rejuvenates ke, abukho ubufakazi oqondile. Esikwaziyo ukuthi kunciphisa ukuvuvukala, ivikela kusukela emisebeni ultraviolet. Inani ngokweqile yalo iguqulwe ibe proksidant, okuyinto engathandeki.
Yamukela Antioxidants zemvelo kuphela kanye yokufakelwa - ke kuyafana, ukuthi amavithamini zokwenziwa. Yemvelo kungcono ukuvikela umzimba kunabaningi imfashini zokwenziwa kwakwakhe.
Ngakho, i antioxidant - iyona engcono kunazo indlela ezingabizi ukuvikela umzimba wakho. Ucwaningo lwamuva luye lwabonisa ukuthi radicals khulula - eziyizimbangela eyinhloko pathologies ezehlukene kubantu nasezilwaneni. Ngokwesibonelo, i-cholesterol i-plaque, ukulimala kwe-DNA, umdlavuza ezihlobene ngokuqondile radicals khulula.
Nokuvuselelwa Proper emva kokuhlinzwa hip ukwa
Extender: ukubuyekezwa kanye Reality
Ukuzibophezela kwemali - Iyini? Kwemali ukuzinikela: imikhawulo, kucatshangelwa izimo futhi inqubo ukwemukelwa
Life sibukela. Izincwadi Strugatsky